Eleghi anya echiche nke mmemme maka ụmụaka nwere ike iyi ihe on-adịghị mma nye ụfọdụ n’ime anyị. M ga-eche n’echiche na ọgbọ kachasị nke ga-eche i kpatara ụmụaka ga-eji chịkwaa. N’aka nke m, gbara mme ime nke a ma kwe ka m boli klasické mmemme site na nwata.
N’ụwa ụwa a jikọtara na nke a, ga-abọ ihe na-apụgh na ikweta na ọgbọ ọ bụla ga-abụ nke na-agụghị nkà na ụzụ. Stránka nie je dostupná na webe, ale tiež na webe, na webe, na webe, na webe, na webe, na telefóne a na telefóne..
Dị ka o kwesịrị ịdị, wrụ dị iche iche maka ịkụziri ụmụaka amalitela site n’apịtị na n’ókè. Ihe ị na – ahọrọ nwe you ikemetụta ihe gbasara nwa gị n’oge ọ bụla, ebe ọ bụ on ihe nkuzi nke ngwaọrụ ọ bụla dịgasị iche iche.
Dị ka ihe atụ, tụlee LOGO, asụsụ mmemme nke on-eme ka ụmụaka nwee ikemalite ịmepụta ihe site on iji obere nnụnụ dị ka ihe osise. Stránka n’iji iwu dị oke aka dịka atụgharị, azụ, aka nri, aka ekpe na akara iji gosipụta anya, ụmụaka nwere ike ịmụta iji iwu iji dọpụta ihe, dị ka ụlọ.
Ọ dị mfe ma na-enye ụfọdụ n’ime ọrụ ndị dị mkpa nke mmemme; echiche ziri ezi na ịga n’ihu. Ọ na-agwọkwa iji jide ụfọdụ ụdị mmasị. LOGO b och ihe ochie dị ka m dị, ọ bụ ezie na ọ dịkwuo ntakịrị, no ngwa anya.
2 Almalite na Ọcha
2.1 1. Deba onwe gị maka n’efu
2.3 3 – imụta ihe ndị bụ isi
3.1 Jiří ihe na-eseghị ihe
Ị dị mkpa ịbanye n’ime ihe mmemme maka nwa gị dị ka ọrụ ọ bụla ọzọ – na uche nwere uche. Ọ bụ ezie on mmemme mmụta malitere m na njem dị omimi on nkà on ụzụ, ọ naghimi ar mal ọrụ otu ụzọ maka onye ọ bụla.
Ibido LOGO len za mnou na egwuregwu kọmputa. N’oge m, kọmputa ndị mmadụ n’oge gboo ezighi ezi na o was ọrụ nka dị ukwuu iji rụọ ọrụ na ha. Enwere m mmasị na ntanetị mbụ site on mmemme, mana agụụ siri ike inwe ike igwu egwuregwu ndị m chọrọ ka ọ duga m n’ịchọpụta amamihe dị omimi site na mkpa.
Zaznamenajte viac, aby ste dostali LOGO
Taa, ndị enyi on ezinụlọ ndị na-ahọrọ ịkụziri ụmụaka ha n’ọtụtụ ụzọ.
Dozviete sa Carolyn Taylor, New Jersey na New Yorku, na 20 dní pred a po dvoch mesiacoch, keď na druhej strane. Otu nwere mmasị, ebe onye nke ọzọ enweghị mmasị.
Ndị a bụ afọ ndị na-eme nchọpụta maka ụmụ gị na ihe ọ bụla dị ọhụrụ ị na-ewebata ha ka ha wwe nwee ohere ịmalite ịnụ ọkụ n’obi. N’iburu nke ahụ n’uche, ka anyị lelee ihe ọhụrụ dị Iche iche iji gosi ha ka ha bụrụ: Nhazi usoro!
Icha dị n’ụdị ụfọdụ dịka LOGO, mana ọ ka dịkwuo elu the m nwekwuo ike. Kama echiche dị mfe, Scratch bụ LOGO na ndị steroid, nke a na-eme ka ụmụaka nke taa maara nke ọma karịa nkà na ụzụ karịa n’oge gara aga.
Nri ya ndị na MIT Media Lab, ụcha abụghị naanị asụsụ mmemme. N’ezie, ọ bụ dum na gburugburu ebe obibi maka ịmụ ihe, on-agụnye ebe online ebe ụmụaka nwere ike ọ bụghị naanụ on-amụta ma na-ekere òkè na-atụle mgbasa ozi mmekọrịta dị kawkww, animácie, anim.
Nhaazi usoro mmepụta ihe, mmuta ihe omuma, mmekorita on oke ohia nke kachasi ihe di iche iche, ihe ndi ozo kwesiri ime?
Dị ka ndị mmepe si kwuo, on-emepụta ihe eji eme ihe maka asatọ on 16. Otú ọ dị, site on ahụmahụ nke on m m, achọpụtara m on ụfọdụ ụmụaka ndị na-eto eto nhire ikemhar ụmhar ụmhar nikdy nie.
Maka ndị gị nke na-agbasochi isiokwu isiokwu ndị a tụrụ anya, atụla egwu, n’ihi na ka nwere nhọrọ. Nwalee Ọtụcha ọhụrụ, nke a pụtara maka ụmụaka dị afọ ise na asaa.
Almalite na Ọcha
Ọcha na-eji usoro nkwụnye ụlọ arụ ọrụ dịka ụzọ nhazi ya
Ka m gbalịa ịkọwa usoro mpempe akwụkwọ ebe a iji mee ka ọ dịkwuoro gị mfe ịga.
1. Deba onwe gị maka n’efu
Nke mbụ, ịrịrị dị na ntanetị ma ọ bụ n’efu. Ị nwere ike gaa na saịtị Scratch ebe a ma debanye aha akaụntụ n’Ịntanet.
Dị ka ọ bụla asụsụ mmemme (ọbụlagodi nke a chọrọ maka ụmụ), dọọ aka al n náịị enwere usoro mmụta. Ọdịiche ahụ dị oke na ọtụtụ nhọrọ dị. Mgbe gafere ihe ndị bụ isi, m ga-atụ aro ka ị gbalịrị ịkụziri nwa gị inkrementally.
Dịka ọmụmaatụ, mg ị na-amalite site na Ọkachasị (ịchọrọ echere), na-enye gị ohere na-enweghị ohere na cat catatar. Nyochaa ihe ndị dị mfe, dịka otu esi eme ka cat gị gagharịa gburugburu ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere otu nnụnụ cat moon na-agba agba na Autobahn na mbụ ị na-anwale, ị nwere ike inwe mmechuihu.
Ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ịnweta enyemaka site na ncha n’onwe ya, ebe ọ bụ na na-enwe ntụziaka nzọụkwụ site na nzọụkwụ dị n’ime ncha, ma ọ bụ ịnwere ike ibudata ya Ntuziaka mal. Ọ bụ ezie na ndị mmepe na-eche na Cratch Scratch na onye nduzi ‘na-enye ụzọ dị ụtọ ịmụtakwu ihe’, nkuzi ndị ahụ na-enwe mmekọrịta.
Nahlásiť nevhodný obsah Odpovedať na stránku nkuzi.
Na nkenke, Ọkpụkpọ ihe nkedo kwesịrị inwe ike enye ụfọdụ nkà nd-ga-abara ụmụ gị uru n’ọdịnihu ná ndụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndụzo. Nke a gụnyere;
Nwee ihe ngosi, ihe omuma na ihe omuma
3 – imụta ihe ndị bụ isi
Utu ka ị nụ edụ iwu ndị nwere ike isiri ụmụaka ike icheta, Scratch on-arụ narụ on usoro nhazi ụlọ. Mwube iwu iwu dị ka ‘Bugharịa Nzọụkwụ X’ ka ga – eji dị ka ihe nkwekọrịta iji kwadoo on ihuenyo. Ihe niile nwatakịrị chọrọ iche bụ otú Avatar ga-esi gaa.
Stránka nie je k dispozícii na webe ihuenyo, iwu mbụ ga-adị. Mgbe nke a gasịrị, gbalịa ịgbakwunye otu ihe, dịka igwu ụda. Ozugbo ebubo abụọ ahụ nọ n’ọnọdụ, na-ewere ha dịka usoro. Usoro bụ usoro omume nke ga-eme otu mgbe nke ọzọ iji mepụta ụdị akụkọ ma ọ bụ ihe nkiri na ọnọdụ ahụ.
Dka nbido mbụ, gbalịa imezu nke a:
Bugharịa nzọụkwụ 50 dị na cat ahụ
Mee ka pusi na-egwuri egwu maka 5 sek
Nanebovzatie na akwụkwọ na ịtọ ụtọ nke ọma maka ịmalite iji chọpụta mmasị nwa gị. Ekwadoro m na-ekiri ụfọdụ vidiyo ngosi ya on umu gị ka ha na-atọ ọchị. Ụmụaka, ha dị ka eserese. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe niile ị ga-ajụ ha bụ ma ọ bụrụ na ha ga-achọ ịnwa ime nke ahụ n’onwe ha!
N’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ mmụta niile, otu n’ime akụkụ ndị dị mkpa nke mmụta anyị na-azụlite ụmụaka bụ ikike na-akpakọrịta. Nke a na-ejikarị ụdị egwuregwu, ebe ụmụ na-enwe ike imekọrịta ibe ha ma mụta ‘igwu egwu nke ọma’.
Chọpụta ebe ịntanetị na-enye ụdị nke a. Jediné, čo nie je možné, mwute ebe ọ bụ onye ọ bụla na-agagharị on any ha ha glued ha smartphones. Ma ak bụ i na-akpali mmasị na ndị mmepe emewo ka akụkụ a dị egwu ebe ọ bụ akụkụ dị mkpa nke mmụta. Mee nzu ya ruo na ahụmahụ dị iche iche dị iche iche.
N’ebe a n-edebe ihe ntanetị, ndị òtù nwere ike ịchọpụta ma nyochaa ndị ọzọ na-atụchasị ihe. Na-eme nke site na ịkekọrịta ọrụ. Webové stránky nie sú k dispozícii, ale nie sú k dispozícii, ale nie sú k dispozícii. Sú k dispozícii. Elu na-adịwanye eluent, boli ste ụyọkọ ndị dị afọ asatọ na-ele ya anya na ị ga-enweta ihe m na-ekwu.
Mkpa n’aka ndi mmepe:
"Ndị ọrụ MIT na-arụkọ ọrụ na obodo ahụ iji nọgide na-enwe mmekọrịta enyi na enyi maka agbụrụ nile, agbụrụ, agbụrụ, okpukpe, ọhụụ mmekọahụ, na njirimara nwoke. Ị nwere ike inyere nwa gị aka ịmụta otú ị ga-esi na-ekere òkè site nyochaa ntụziaka obodo ahụ ọnụ. Na-agwa ndị òtù ka ha kwuo okwu nke ọma ma nyere aka mee ka ụlọ ọrụ weebụ ahụ dị mma site n’ịkọkọ ọdịnaya ọ bụla na-esoghị nduzi obodo. Ndị na-arụ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji jikwaa ọrụ na saịtị ahụ ma zaa akụkọ, site n’enyemaka nke ngwaọrụ ndị dịka CleanSpeak profanity filter ".
Jiří ihe na-eseghị ihe
Ọ bụrụ na ị bụ ultraparanoidné ma ọ bụ naanị enweghị ike ịnọgide na-enwe ike njikọ Ịntanetị n’ụzọ ụfọdụ (Enwere m mmetụta mgbu gị), enwere nhọrọ maka gị. Ncha nwere nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ dịnụ nke ị nwere ike iwunye on kọmputa gị.
gaa Leta Dee nchịkọta akụkọ ntanetị 2.0 nbudata akwukwo maka ntuziaka banyere otu esi etinye ya komputa gi.
E wez nga na ndị isid obodo on saịtị ahụ n’onwe ya enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị n’ịntanetị iji nyere gị aka n’ịchọgharị nwatakịrị gị ka ịchọọ ụwa dum site na nzuzo. Lee ụfọdụ n’ime ha;
Udemy: Ụmụaka na-ekpuchi ya
Najnovšie komentáre: Nduzi nke Onye Mmemme na-ewepu
Ọ bụ ezie on m na-eche Scratch bụ otu n’ime asụsụ mmemme kacha mma maka ụmụaka iji mụọ ihe, ọtụtụ ndị ọzọ dị dịka nhọrọ. N’ebe ụfọdụ, ị na-elekwasị anya n’ịgba chaa chaa na akụkụ anya nke mmụta, ebe ndị ọzọ bụ omenala.
Gbalịa ma chọpụta nke ahụ bụ i zuru okè maka ụmụ gị;
Daisy na Dinosaur
N’ebe sayensị na iwu nọ na-abụkarị ubi mara mma ịbanye, ebe ahịa azụmahịa taa dị nnọọ iche. Ụwa chọrọ ọtụtụ ndị ọkachamara na teknụzụ n’ọdịnihu. Nbụna nke ka mma, na ịntanetị nke Ihe, Mmepụta 4.0 na chzwa na nchekwa nchebe cybersecurity ka ukwuu, oh ndị a enweghị njedebe.
Elubụna agbụrụ omenala ndị dị ka ọgwụ na-arịwanye eluent site on nkà na ụzụ dị ka robotics on nnukwu data.
Ọ ụ zie zie ụ rat ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke Naši priatelia, ktorí boli na tom, aby boli na kari ikiri katuị na telivishọn. Ana m akwado nke ọma ma ọ dịkarịa ala ịnwale iji gosi mmasị on mpaghara a.
Možno sa zdá, že koncept programovania pre deti sa pre niektorých z nás zdá
Çocuklar için Kodlama: Scratch Programming
Eleghi anya echiche nke mmemme maka ụmụaka nwere ike iyi-e na-adịghị mma nye ụfọdụ
Je schopný programovať infanoja ŝajnas iom stranga al iuj el ni. Mi konjektus, ke
Belki de çocuklar için programlama kavramı bazılarımız için biraz tuhaf görünebilir. Eski neslin çoğunlukla
Làm thế nào các siêu blogger hoạt động: Đạt hiệu quả với một lịch trình blog
Sprievodca A-to-Z pre vrstvu Secure Sockets Layer (SSL) pre podniky online
Sada ikon WHSR – Stiahnite si 1 200+ originálnych ikon zadarmo
Кинста, ВП Енгине или Фливхеел – Упоређивање трију најбоље управљаних ВордПресс хостова!
Hĺbková analýza 5 populárnych doplnkov pre vstupnú stránku WordPress
Los 10 temas principales de Sports Shopify para lanzar una presencia en línea ganadora de ventas
5 parimat veebimajutuse GoDaddy alternatiivi: leidke endale ideaalne pakkuja
2020. aasta parim poodide tarkvara
Revisión de HostPapa: independencia a un precio
WebHostFace PRAEIUDICATUS de acetabula, salva privatam Duis egestas elementum risus
วิธีการเพิ่มแบบฟอร์มการติดต่อเพื่อ WordPress (วิดีโอ YouTube)
Quam habetis sa Tampok na imago ng WordPress Default?
7 parimat poodiplatvormi | Ehitage oma pood juba täna
6 Mga Modyul na ipinapakita ang Mga Pag-signup ng Email sa email na Blog
Başarılı Bir Blogger Hediye Nasıl Çalıştırılır
İçerik Pazarlamanın Her Zaman Link Oluşturmayı Zafer Etmesinin 5 Nedeni
Bloguk manikientzako: Blog yarasa hastea 2020an
Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin’ny สถิติการอ่านคำ
Plugin-uri WordPress recomandate (pentru 2020)
Внутрішній совок на сайтах членства
30 Khubarado siyaabo ah oo loogu helo Raad-raac bado oo Twitter ah
วิธีการติดตั้ง WordPress – คู่มือวิดีโออย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น (บทช่วยสอน)
Cómo Tristan Hervouvet construyó la imagen Reciclar de 0 a 1,000,000,000 de imágenes
Де хто, що, де, коли і чому відмінний блог Schreiwen
9 razones por las que debe usar WordPress (y cuándo no debe rsquo; t)
BigCommerce Bewertungen | 7 wichtige Dinge, die Sie wissen sollten
Tlhahlobo ea Sephiri: Ke botsoa Likhamphani tsa Хостинг tsa 28 tsa Підтримка прямого чату
9 spôsobov, ako sa osobný blogger môže zmeniť na špecializovaný blogger
15 ธีม WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์พร้อมมือถือ
Virtual Private Network (VPN): Zelo podroben priročnik za novorojenčke
Bluehost vs HostGator: Welches ist das Beste für Sie?
6 Mga Piraso ng Software sa Blogging Maaaring Hindi Mo Narinig
Wie man Lebensmittel online verkauft